ROI na-agbakwụnye Nlekọta Nlekọta maka Ahịa Ahịa | Martech Zone
ROI na-agbakwụnye Nlekọta Ahụike maka Ahịa akpaaka
Wenezdee, Jenụwarị 16, 2013 Wenezdee, Jenụwarị 16, 2013 Douglas Karr
Onye ahịa ahịa akpaaka anyị na onye nkwado, Right Na mmekọrịta (ROI), abụwo ihe ịtụnanya iji rụọ ọrụ. Ha ghotara na ahia akpaaka bu ahia na etolite ma ha kpebisiri ike ime ka uzo nke ha gaa karia ikiri ihe ndi ozo na eme. Ọ bụ otu n'ime ihe mere njirimara onye ọrụ ha ji dị mfe iji, oge mgbago ha dị ngwa ngwa karịa ndị na-asọmpi, na ike nke usoro ha dị iche n'etiti ndị ọgbọ ha.
Ọ bụ ihe kpatara ya Troy Burk a na-amatakwa dịka onye ndu na nghọta etu isi emetụta ndị ahịa ndụ. Ọtụtụ sistemụ na-ere ahịa akpaaka na-amalite site na ịkpọ oku na-arụ ọrụ ma kwụsị na ntụgharị. Troy na-ewu ụlọ ọrụ ya oge niile na ihe ọmụma dị mkpa iji gbanwee atụmanya ziri ezi na-achọta site n'inyocha omume nke ndị ahịa gị. Dịkwa oke egwu dịka inweta azụmaahịa ọhụụ na-eme ka ị hụ na ị na-arụ ọrụ azụmaahịa gị. Ha kọwaa nke a dị ka ahịa ahịa ndụ.
E nwere nza nke ngwaahịa ga-enyere a marketer zipu ahịa ozi na-elekọta mmadụ media ụwa. Ngwa ndị a na-enyere ndị ahịa aka iti mkpu na oghere mmekọrịta. Ọ na-amasị m ịkpọ ngwaahịa ndị a "igwe okwu" dị ka ebumnuche bụ isi bụ ịnwale ma bulie ozi mgbasa ozi sara mbara nye ndị na-ege ntị. Anyị ewerela ụzọ dị iche iche na mgbasa ozi mgbasa ozi anyị na arụmọrụ. Anyị na-enyere ndị ahịa aka ilekwasị anya na nzaghachi azụ na ozi mgbasa ozi ọha na eze ha na-eme. Amol Dalvi - VP ma ọ bụ Ngwaahịa na Teknụzụ
ROI Social ga-eme ka ndị ahịa nyochaa ọrụ twitter, akara ọrụ site na ndị na-eso ụzọ twitter, ma zaghachi ozi twitter.
Ọzọkwa, ọrụ nwere ike metụtara mara Ndi ana-akpo na gị ROI na akaụntụ. Nke a bụ nnukwu uru dị ka ndị a na-amaghị na njikwa twitter bụ ndị ana-akpọ Ndi ana-akpo na nchekwa data ha.
Nke a bụ ike dị ịtụnanya! Ihe ngbanwe a na-agbanwe na-enye onye na-ere ahịa ohere iji nwalee ma tụọ otu omume Twitter dị ka ịgbaso, retweet ma ọ bụ ozi ziri ezi, na-emetụta mmekọrịta ndị ahịa niile. Ọ bụrụ n'ịchọta na mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ihe ngosi siri ike nke omume ịzụta, ị nwere ike ịchọrọ akara ndị a dị elu karịa ọrụ ndị ọzọ ma gbanwee ozi gị na onyinye gị. Ikekwe ị ga-ahụ na ha nwere mmetụta pere mpe - yabụ ị nwere ike ịgụta ha obere ma hazie njikọ aka nke na-elekwasị anya na mmekọrịta ndị a na-enweghị imebi akụ.
Tags: Ntinye 3dahịa ahịa ndụNdụ ahịa ndụakụrụngwa ahịanri na mmekọrịtaakara mmekọrịtaakara twitter
Ndụmọdụ iji zere iwe iwe na atụmatụ Email gị
Ndepụta Ndepụta Facebook gị
Jenụwarị 17, 2013 na 1:33 PM
Ekele dịrị Troy, Amol na ndị otu ROI! Akwa mma.